Turkiga oo sheegay inay diyaar u yihiin inay wadahadal layeeshaan Giriiga - Tilmaan Media
Turkiga oo sheegay inay diyaar u yihiin inay wadahadal layeeshaan Giriiga
Wasiirka arrimaha dibadda Turkgia mevlut cavusoglu ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inay wadahadal lagalaan dalka Giriiga oo uu kala dhaxeeyo muran dhanka xuduuda badda ah. Sidoo kale wuxuu sheegay in Turkigu kalaaban doonin hawlaha shidaal sahminta ay kawadaan badda Meditareeniyaanka.
Cavusoglu ayaa sheegay in Turkigu shuruud soo rogi doonaan hadddii Giriigu shuruud ku xiraan bilaabashada wadahadalada labada dal.
Dhankeeda madaxwaynaha Giriiga Katerina Sakellaropoulou ayaa soo dhawaysay dib ulaabashada doonta sahminta shidaalka ee Turkiga laga leeyahay, waxayna sheegtay in Giriigu cidna uusan duulaan ku ahayn.
Laakiin Cavusoglu ayaa sheegay in doonta sahminta ay magaalada Antalya dib ugu soo laabatay si dayactir loogu sameeyo. Wuxuuna sheegay in doomo kale oo Turkigu leeyahay ay wadaan hawlaha sahminta shidaalka.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay inaysan ubadnayn in Midawga Yurub ay cunaqabatayn kusoo rogaan dalkiisa sababo la xiriira khilaafka kala dhaxeeya Giriiga iyo Qubrusta Giriiga.
Ciidama K/Galbeed oo sheegay inay dileen sarkaal katirsanaa Alshabaab
Trump oo sheegtay in lasiiyay abaalmarin aan jirin